Midawga Africa Oo soo Faro-galinaya Muranka Badda Soomaaliya.(Akhriso War-saxaafadedka) – Xeernews24
Midawga Africa Oo soo Faro-galinaya Muranka Badda Soomaaliya.(Akhriso War-saxaafadedka)
7. September 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Golaha Ammaanka iyo Nabad-galyada Ururka midowga Africa ayaa soo fara-galiyay muranka dhinaca soohdinta badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya,iyagoo qoraal ay soo saareen dhinacyada ugu baaqay in xal laga gaadho.
Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika ayaa ka codsaday Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u magacaabo Ergey gaar ah oo dhinacyada kala shaqeeya sidii loo heli lahaa degenaansho, xal nabdoon, wadatashi iyo wada shaqeynta qaababka gobolka la xirdhiidha
Hoose ka akhriso qoraalka Midowga Africa
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/09/AU-200x140.png 140 200 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-09-07 17:00:522019-09-07 17:01:46Midawga Africa Oo soo Faro-galinaya Muranka Badda Soomaaliya.(Akhriso War-saxaafadedka)
Daawo;Sheekh Bashiir oo Geele dhulka la galay.
Dhibaatada Dalka Liibiya: Fransiiska oo hakiyay dowrkiisa howlgalka Nato xilli uu khilaaf wayn kala dhaxeeyo Turkiga.
XAALADIHII UGU DANBEEYAY ITOOBIA IYO MAANTA.
Nin isku dayey inuu dilo Raisul Wasaare Justin Trudeau oo gacanta lagu soo dhigay (Sawirro)
Ra’isul Wasaare Boris Johnson oo guul daro siyaasadeed ku dhacday. Rooda Dahir Gadoode oo ka hadashay dhalinta reer Sitti ee ku xidhan jeelasha...